काठमाडौं, ८ कार्तिक । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच भेटवार्ता भएको छ । मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक घट्नाक्रमबारे छलफल गर्न तीन नेताबीच आज भेटवार्ता भएको हो । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको बैठकमा एमसीसी, सत्ता गठबन्धन र निर्वाचनबारे छलफल गरेको बुझिएको छ । […]
प्रधानमन्त्री देउवा र जसपाका अध्यक्ष यादवबीच भेटवार्ता
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच भेटवार्ता भएको छ । प्रधानमन्त्री देउवा र अध्यक्ष यादवबीच आइतबार अपरान्ह ४ बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भेटवार्ता भएको हो ।भेटवार्तामा देउवा र यादवबीच समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिका विषयमा छलफल भएको जनता समाजवादी पार्टीका एक नेताले बताए ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र दामोदर मोदीबीच भेटवार्ता सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्रीद्वयबीच नयाँदिल्लीस्थित हैदराबाद हाउसमा भेटवार्ता सुरु भएको हो । हैदराबाद हाउसमा प्रधानमन्त्री देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीबीच वान टू वान वार्ता हुँदैछ ।त्यसपछि ११ः४५ देखि १२ः१५ सम्म दुई देशका प्रतिनिधिमण्डलबीच वार्ता हुँदैछ भने १२ः१५ देखि १२ः३० बजेसम्म विभिन्न सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदैछ । सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि प्रधानमन्त्री मोदीले प्रधानमन्त्री देउवाको सम्मानमा दिवा भोजको
प्रधानमन्त्री देउवा र अमेरिकी राजदूतबीच भेटवार्ता
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेपालका लागि राजदूत र्यान्डी बेरी बीच भेटवार्ता भएको छ । प्रधानमन्त्री देउवा र राजदूत बेरीबीच बुधबार साँझ ६ बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भेटवार्ता भएको हो ।भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री र राजदूत बेरीबीच एमसीसी कार्यान्वयनका विषयमा छलफल भएको भएको बालुवाटार निकट श्रोतले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवा र एससीसी उपाध्यक्ष सुमार बीच आज भेटवार्ता हुँदै
काठमाडौ‌ । अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ९एमसीसी०की उपाध्यक्ष फतिमा सुमारले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आज भेट्दै हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री देउवा र सुमारबीच आज दिउँसो ४ बजे प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा भेटवार्ता तय भएको छ। बिहीबार काठमाडौं आइपुग्नु भएकी सुमारले विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरिरहनु भएको छ । यसअघि सुमारले आज माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष […]
काठमाण्डाै – प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच भेटवार्ता भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री देउवा र अध्यक्ष प्रचण्डबीच बिहान एक घण्टा कुराकानी भएको हो । उहाँहरुबीच मन्त्रिपरिषद्लाई चाँडै पूर्णता दिनेबारे छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्रीमा देउवा नियुक्ति भएको डेढ महिना पुग्न लाग्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच भेटवार्ता भएको छ । प्रधानमन्त्री देउवा र अध्यक्ष प्रचण्डबीच प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बिहान करिब एक घण्टा भेटवार्ता भएको हो ।उनीहरुबीच मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिनेबारे छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । गठबन्धन सरकार गठन भएको लामो समय भएको अवस्थामा दुवै नेताबीच चाँडै मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिनेबारे विस्तृत रुपमा छलफल भएको बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवा र डा. गोविन्द केसीबीच भेटवार्ता
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र डा.गोविन्द केसीबीच भेटवार्ता भएको छ । प्रधानमन्त्री देउवा र डा.केसीबीच आज मंगलबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास वालुवाटारमा भेटवार्ता भएको हो । यसअघि डा. केसीले स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीबाट उमेश श्रेष्ठलाई हटाउनुपर्ने लगायतका पाँच बुँदे माग अघि सार्दै भदौ ३ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिएका थिए । उनको अल्टिमेटम सकिन दुई दिन बाँकी रहेको अवस्थामा […]
काठमाडौं, १२ साउन । मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच भेटवार्ता भएको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा दुई नेताबीच भेटवार्ता भएको हो । प्रधानमन्त्री बनेको दुई साता बित्न लाग्दासमेत मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाई भएको भन्दै पार्टीभित्रैबाट चासो र चिन्ता बढेपछि प्रधानमन्त्री देउवा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न आँतुर छन् । […]
प्रधानमन्त्री देउवा र जापानी राजदूतबीच भेटवार्ता
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेपालका लागि जापानी राजदूत युटाका किकुटाबीच भेटवार्ता भएको छ । राजदूत किकुटाले बिहीबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास वालुवाटार पुगेर भेटवार्ता गरेका हुन् । भेटमा राजदूत किकुटाले जापानले दिने १६ लाख डोज खोप चाँडै आउने जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री देउवालाई मायाको चिनो (टोकन अफ लभ) प्रदान गरेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवा खोप […]